WAA MAXAY FARAQA U DHEXEEYA GUGA IYO JIILAALKA XILLIGA QABOOBAHA: DABEECADAHA IYO FARQIGA U DHAXEEYA LABADA NOOC? - BEER CAGAARAN
Dooro si sax ah: waa maxay farqiga u dhexeeya jiilaalka iyo guga?
Garlic waa mid ka mid ah dalagyada khudradda ugu caansan dunida oo dhan. Waxa aan la yaab lahayn, iyada oo la adeegsanayo qaabkeeda. Ka dib oo dhan, waxaa loo isticmaali karaa ma ahan oo kaliya ujeedada loogu talagalay - cunto, laakiin sidoo kale loo wanaajiyo caafimaadka iyo guud ahaan wanaagga.
Way fududahay in la soo iibsado toonta qaybta khudradda ee dukaanka ama suuqa, inkasta oo ay aad u fiican tahay inaad korto naftaada, gaar ahaan maadaama aysan aheyn wax adag, xataa xitaa beerta nudaha ah ayaa sameyn karta.
In our article waxaan ku faahfaahin doonaa si faahfaahsan ee sifooyinka iyo faraqa u dhexeeya guga iyo toon jiilaalka. Waxa kale oo aad daawan kartaa fiidiyaha waxtar leh mawduucan.
Garlic waa warshad qoryo leh, oo loo qaybiyay labo nooc - guga iyo jiilaalka. Maxay kala duwan yihiin? Waxay ka kooban tahay waqtiga soo degitaanka (guga waxaa la beeray guga, jiilaalka - dayrta).
Waxaa laga yaabaa in aad xiiseyneyso inaad wax ka akhriso qoraxda dilka ah - toonta duurjoogta ah, iyo sidoo kale meesha laga gadan karo iyo sida loo kariyo khudradda madow.
Maxaa ka duwan midba midka kale?
Markaad soo dhisto
Spring ma u dulqaadan heerarka diiran, sidaas darteed waxaa lagu talinayaa in la beero guga hore (dabayaaqadii March - horraantii Abriil), marka dhulka kulaalaa 5-7 digrii.
Toontada xilliga qaboobaha waxay si fiican u dulqaadanaysaa heerkulka aan fiicnaynSidaa darteed, waxaa lagu beeray dayrta, sida caadiga ah, waxay udhowyihiin bartamaha bisha 10aad (waxay ku xiran tahay astaamaha cimilada ee gobolka, waxa ugu muhiimsan waa in ay dhulka ku jiraan 15-20 maalmood ka hor bilawga cimilada qabow ee joogtada ah).
Guddi: Qoto-dheeraynta dalabku waa ugu yaraan 6 cm si looga hortago barafowga qaboobaha.
Sida loo kala saaro muuqaalka? Toonta ubaxa waxay leedahay cabbir yar oo basal ahkuwaas oo tiro badan oo ilkaha ah (ilaa 30 xabo) ay ku yaalliin meelo badan oo safaf ah oo aan jirin wax asaasi ah (fallo ubax). Jidhku waa cufan, sababtoo ah waxay ku habboon tahay kaydinta muddada dheer, iyada oo aan lumin sifooyinka. Fududaanta la'aanta ee ay ugu wacan tahay kaliya hal nooc doorasho - ilko.
Jiilaalka - basal of a size weyn, ka kooban dhowr ilkood (6-10 gogo '), kuwaas oo ku yaalla wareegga stem (ubaxa ubaxa, samaynta nalalka hawada). Waxaa lagu dhex beeri karaa siyaabaha sadexda nooc - goygooda, nalalka keligood ah (laga koro basasha basasha) iyo basasha anteenada.
Toonta guga, qoyaanka qoyaanku wuxuu ciyaarayaa door muhiim ah (dheecaanku sidoo kale waa muhiim, maxaa yeelay waxaa laga helayaa qoyaan badan). Aad bay muhiim u tahay in la sifeyno sariirta biyaha ka hor intaan la beeri, iyo toonta dhoobada dhulka. Iftiinka, loamy carruureed ayaa ugu haboon, waxay fiicnaan doontaa in lagu kobciyo arrimo dabiici ah, tusaale ahaan, isticmaalka compost.
Cimilada roobka waxay dardar-gelinaysaa Bisaylka, halka qallalan iyo cimilada kulul ay hoos u dhigayaan geeddi-socodka.
Sidoo kale, dhalidda waxaa saameyn ku leh dabeecadda kaydinta xilliga qaboobaha: haddii nalalka lagu keydiyo heerkul ah 18 digrii iyo kor ka sarreeya - toonta ayaa kori doona ballaaran, laakiin waxay sii weynaan doontaa. Oo marka lagu kaydiyo meel qabow (qiyaastii 5 darajo) - warshadu waxay noqon doontaa mid yaryar, laakiin dalagyada ayaa hore u daadi doona. Sidaa darteed, bannaanka qaar ka mid ah ku talinaynaa gogol ubax ah meel qabow bil ah ka hor beerto..
Ka hor inta kaydin dalagga, waa lagama maarmaan in la qalajiyo dalagga, ka saar dhammaan caleemaha iyo badi asliga ah. Baro ku saabsan noocyada ugu wanaagsan ee toonta guga, iyo sidoo kale arag talooyinka koritaanka iyo daryeelidda khudaarta, halkan.
Jiilaalka - ugu fiican ee lagu beeray ciidda loamy-sida. Waxa kale oo ay noqon kartaa wanaagsan in bacrimiya peat ama sariirta humus dhowr todobaad. Si loo ilaaliyo toonta mustaqbalka, waa in aan lagu beerin meelo qoyan iyo bacriminta bacriminta leh ee ka kooban bacriminta waa in la adeegsadaa.
Digniin: Habka ugu caansan ee soo degitaanka waa calaamado. Nalalka waaweyn waxay koraan oo keliya ilkaha waaweyn.
Nooca nooc kasta oo toon ah jiilaalka ayaa siinaya fallaadh sameeya nafaqooyin badan, samaynta nalalka yar. Sidaa darteed, waa suurad wacan in la jebiyo fallaadho. Ka hor inta goynta, waxaa lagu talinayaa in aan sariiro sariiraha muddo 2-3 toddobaad ah si ay toonta u dhaqdo si dhakhso ah ka hor inta aanad u dhigin kaydinta. Qiyaastii saddex toddobaad ka hor sariiraha goosashada, waa in la dabciyo.
In si faahfaahsan oo ku saabsan daryeelka ee toon jiilaalka, cudurada iyo sifooyinka quudinta, waxaan u sheegay in this article.
Toonta guga waxaa la goostay dhammaadka xagaaga - bilawga xilliga dayrta., iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada. Calaamadda saxda ah ee Bisaylkiisa ayaa noqon doona huruud ah iyo meelo badan oo dusha sare ah.
Ugu dambeyntii waa ku qanacsan tahay diyaargarowga dhirta for goosashada, waxaad baadhi kartaa hal basal oo si taxadar leh u baaro. In midhihii bislaado, bacriminta si fudud ayaa loo saaraa, jidhkuna waa mid cajiib ah oo casiir leh.
Waqtiga goosashada xilliga qaboobaha - dhammaadka Juulay, bilowga Agoosto (Tani waa wakhtiga ay khudradda kale u bislaadaan, iyo xafladaha ay ku hawlan yihiin caanaha, ee qashinka ah ee toonta ay door muhiim ah ka ciyaaraan). Buuxi buuxda, caleemaha ayaa la keeni doonaa - kuwa ugu hooseeya waa qallalan yihiin, kuwa ugu sarreeya waa la qallajiyaa. Waa arrin aad muhiim u ah in la goosto xilligii loogu talagalay, oo aan u oggolaanayn in la gooyo, tan iyo geedka weyn ee aan la awoodin in la badbaadiyo.
Adoo haya tayo
Toonta xilliga guga waa la ilaaliyaa - laga bilaabo 10 bilood illaa 2 sano, iyadoo ku xiran nooca, xitaa heerkulka qolka, taas oo aad u sahlan haddii aad qorsheyneyso inaad ku kaydiso aqal kiro ah.
Toon jiilaalka waxaa lagu kaydiyaa wax ka xun tan toon guga - celcelis ahaan 5-7 biloodmar kasta ma suura galin karto in xitaa laga dhigo ilaa iyo dhamaadka jiilaalka, si dhaqso ah u dhaqdhaqaaqdo oo lumiso sifooyinka caafimaadka leh iyo dhadhanka. Kaydinta meel qabow, sida maqaasiinka ama qaboojiyaha, ayaa lagula talinayaa.
Ma jirto jawaab suugaan ah oo su'aashan ah, nooc kastaa wuxu leeyahay faa'iido u gaar ah, waana adiga oo keliya inaad go'aamiso midka la doorbido.
Sida iska cad, haddii nabadgelyadu ay tahay mudnaan - gu'ga guga.
Haddii ay muhiim tahay in la sameeyo goosashada jiilaalka, adigoo isticmaalaya toontaada - qaadan jiilaalka.
Intaa waxaa dheer, jiilaalka siinayaa dhalidda sare, ilkaha iyo nalalka waa weyn.
Si kastaba ha noqotee, toonta guga waxaa la rumeysan yahay inay faa'iido badan leedahay.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido waxyaabaha khubarada ah ee ku saabsan cidda cuni karta iyo kuwa ka hortagaya inay cunaan toonta, waa wax ku ool ah daaweynta cudurrada, iyo qaabka ay u fiican tahay inaad qaadato. Maxay tahay xasaasiyaddan, iyo sidoo kale urta afka iyo gacmaha ka dib marka la isticmaalo?
Mid kasta oo ka mid ah noocyada noocan oo kale ah waxay u fiican tahay qaabkeeda, sidaas darteed Ogaanshaha kala duwanaanshaha Toonta guga laga bilaabo jiilaalka, si fudud ayaad u dooran kartaa doorashada ugu fiican ee adiga naftaada. Laakiin waxaa ugu wanaagsan in la geeyo goobtooda iyo midka iyo kan kale.